Tsy mbola nisy resaka fanakatonana koa fa ny fanomezana fe-potoana ihazakazahan’ireo sekoly ireo amin’ny ara-dalàna no nisy. Raha tsiahivina, nisy sekoly tsy nanara-dalàna 600 tamin’ny taon-dasa ary ny fanentanana natao hidirana amin’ny ara-dalàna no nampihena azy ho 190 sisa. Taorian’ilay raharaha La croyance moa dia nihena 150 indray izy izao. Fampiharana ny lalàna no natao, hoy izy, satria manana fahefana hanome sy hanaisotra alalana hisokatra ho an’ny sekoly na alalana hampianatra ho an’ny mpampianatra ny minisitera rehefa hita fa misy tsy ara-dalàna ao. Amin’ireo sekoly ireo, ohatra, dia misy nangataka alalana hanokatra kolejy nefa rehefa natao ny fitsirihana dia lasa misy hatramin’ny lisea. Ireto sekoly koranika ireto, ohatra, dia nahitana fa nisy fikasana hanao fampianarana foto-pinoana silamo tafahoatra tao kanefa tsy izany no alalana nomena azy. Nihaona tamin’ireto solontenan’ny silamo ireto tetsy amin’ny minisitera tetsy Ampefiloha moa ny minisitra omaly.